www.camaloow.com - News: War Culu:--Ciidamo ka tirsan Dowladda iyo Dad Shacab ah oo ku dagaalamay Siinka-dheer..............
December 10 2018 03:36:10
War Culu:--Ciidamo ka tirsan Dowladda iyo Dad Shacab ah oo ku dagaalamay Siinka-dheer..............
<?php </a> Degaanka Siinka-Dheer ee duleedka Magaalada Muqdisho Wararka aan ka heleyno waxaa ay sheegayaan in halkaas uu Dagaal ka dhacay kaas oo u dhaxeeya Ciidanka Dowladda Soomaaliya iyo Dadka Degaanka.
Dagaalka ayaa waxaa uu bilowday kadib markii Ciiidanka Dowladda ay Dadka ku bilaabeen in ay ka bixiyaan Guryaha ay dagan yihiin balse arrintaas ay ka horyimaaden qaar kamida Dadka Deegaanka sida lasheegay.
Waxaa wararku sheegayaan in 1 qof uu Dagaalkaas u dhintay halka dhaawacuna uu intaas ka badan karo.Sidoo kale Dadka Daganaa Siinka-Dheer ayaa isaga cararay Xaafadahooda si-uusan saameyn Dagaalku ugu yeelan.
Qaar kamida Dadka isaga Cararay Guryahooda oo lahadlay Idacada Kulmiye ayaa waxaa ay sheegeen in hada Xaladoodu adag tahay ayna ku jiraan Dad danyar oo aanan awoodin in ay baxaan.
Wali Saraakiisha Ciidanka Dowlada Soomaaliya iyo Maamulka Gobolka Banaadir midna kama hadlin Arrintan, waxaase jirta Burburinta Guryo lagu lasheegay Sharci daro oo Muqdisho ka socday.
· salaad on January 16 2016 · 0 Comments · 28218 Reads ·
Render time: 0.01 seconds 28,900,383 unique visits